I-Energizer Power Max P18K Pop: Ifowuni enebhetri ye-18.000 mAh | I-Androidsis
Kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo kwaqinisekiswa ukuba i-Energizer kungekudala izakuveza i-smartphone nge I-18.000 mAh ibhetri. Nangona kulindeleke oko Umboniso wawuzakwenzeka kwi-MWC 2019. Ngapha koko, uphawu luneeplani ezinkulu zomnyhadala wokufowunelwa e-Barcelona. Kuba kulindeleke ukuba yazisa ii-smartphones ezintsha ezingama-26 kwimeko leyo. Zininzi iindaba ezilindelwe kuwe.
Kodwa ukwazi i-18.000 mAh ye-smartphone yenkampani akufuneki silinde ixesha elide. Ukusukela oku I-Energizer Power Max P18K Pop ibhengezwe ngokusesikweni. Ngaphandle kwamathandabuzo, i-smartphone ibizelwe ukumangaliswa. Ngenxa yokuba yimodeli kunye nebhetri enkulu kunazo zonke kwimarike namhlanje.
Le modeli ijoyina amanqanaba aboniswe ngaphezulu nje kweveki edlulileyo. Eyona nto iphambili kwi-Energizer Power Max P18K Pop ibhetri yayo enkulu. Kodwa ayisiyiyo kuphela kwento etsala ingqalelo kuyo. Kuba isixhobo siza kunye yatsho ikhamera ebuyisekayo, nto leyo ngokungathandabuzekiyo iya kuba yenye imeko kulo nyaka.
Iinkcukacha ze-Energizer Power Max P18K Pop
Esi sixhobo siza kuboniswa ngokusemthethweni kwi-MWC 2019. Nangona okwangoku sinenxalenye yokubalulwa kwayo, ke sinokufumana umbono ocacileyo wento esinokuyilindela kwesi sixhobo. Ke sele siyazi into emasiyilindele kule Power Energizer Max P18K Pop kumnyhadala oseBarcelona ekupheleni kwenyanga. Singalindela ubungakanani obuphakathi phakathi kulo mba:
Isikrini: 6,2 intshi HD isisombululo
Ukugcina ngaphakathi: I-128 GB
Cámara traseraI-12 MP + 5 MP + 2 MP
Ikhamera yangaphambili: 16 + 2 MP
Ibhetri: I-18.000 mAh
Ngaphandle kwamathandabuzo, i-smartphone emangazayo ngokweenkcukacha. Kuba ifikelela kwinqanaba eliphakathi, kodwa ngothotho lomngcipheko, kodwa izigqibo ezinomdla kwinxalenye ye-Energizer. Kwelinye icala, ifemu ikhethe isikrini esikhulu, esinezakhelo ezibhityileyo, phantse azikho. Nangona ingenawo umngxunya okanye inotshi kwiscreen. Into abasebenzisi abaninzi abaya kuyithanda ngokuqinisekileyo. Ikhamera yangaphambili iyarhoxa
Yayisele isaziwa into yokuba uphawu luya kubheja kule nkqubo kwezinye iimodeli. Ngoku siyayazi le Energizer Power Max P18K Pop efika nekhamera echaziweyo. Ikwayikhamera ephindwe kabini, i-16 + 2 MP. Ke kulindeleke ukuba babenakho ukuthatha ii-selfie ezintle kunye naye. Asikabi nakho ukubona inkqubo isebenza. Kuya kufuneka silinde i-MWC 2019 ukubona ukuba le nkqubo ingeniswe njani kwisixhobo.
Le Energizer Power Max P18K Pop nayo isishiya nezimanga ngasemva. Kuba isixhobo siza nekhamera kathathu. Sibona indlela iikhamera ezininzi eziqheleke ngayo phakathi kuluhlu oluphakathi. Ezinye iikhamera ze-12 + 5 + 2 MP, ngokungathandabuzekiyo ezithembisa ukusebenza kakuhle. Kukwalindeleke ukuba kubekhona ubukho bobukrelekrele bokuzenzela kubo.
Into enokusothusa, kuba i-smartphone iza ne-Helio P70 processor. Inkqubo yeMediaTek phakathi kuluhlu oluphakathi, kodwa oko kwenza ukusetyenziswa okubalaseleyo kobukrelekrele bokwenza. Iza ne-6 GB ye-RAM kunye ne-128 GB yokugcina kwangaphakathi. Umdibaniso olungileyo, ngokungathandabuzekiyo ukunika amandla awaneleyo ngamaxesha onke.
Nangona kunjalo, besingenakulibala malunga namagubu akhe. Inqaku elomeleleyo lale Energizer Power Max P18K Pop. Ibhetri ene-18.000 mAh umthamo, Yeyiphi imodeli Android kunye ibhetri likhulu kwimarike namhlanje. Iqinisekisiwe ukuba iza kufika nayo intlawulo ekhawulezileyo, enye enye imodeli yokuba nale teknoloji. Asazi ukuba loluphi uhlobo lokuhlawuliswa okukhawulezayo kule modeli. Enkosi kule bhetri ungathetha iiyure ezingama-90, umamele malunga neeyure ezili-100 zomculo kwaye ubukele iintsuku ezimbini zeevidiyo zonke ngaphandle kwekhefu. Ngokutsho kophawu, inokuvulwa ukuya kuthi ga kwiintsuku ezingama-50.
Kwi-MWC 2019 siya kwazi ngakumbi ngayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » I-Energizer Power Max P18K Pop: I-smartphone ene-18.000 mAh ibhetri
I-Pushbullet isaphila kwaye iphinda yoyilwe ngokutsha ngoYilo lweZinto, imowudi emnyama kunye nokunye